विवाहित महिलाका यी ५ स्वभाव, जसले अविवाहित पुरुषलाई गर्छ आकर्षित | Rajmarga
विवाहित महिलाका यी ५ स्वभाव, जसले अविवाहित पुरुषलाई गर्छ आकर्षित
हिजोआज हामीले धेरै यस्ता अविवाहित युवाहरु भेट्न सक्छौं जसले विवाहित महिलालाई मन पराउँछन्। यस विषयमा धेरै युवाहरु खुलेर कुरा गर्न चाँहदैनन् तर, भित्रभित्रै उनीहरुले विवाहित महिलालाई मनपराएका हुन्छन्।
आफूभन्दा धेरै उमेरका महिलालाई भर्खरका युवाहरुले मन पराउँछन् भन्ने कुरा सुन्दा अलि अचम्मको र अमिल्दो लाग्न सक्छ तर, यो सत्य हो। हालसालै गरिएको एक अध्ययनले पनि यस कुरालाई पुष्टी गरेको छ। धेरै अविवाहित युवकहरु आफ्नो चिनजानका विवाहित महिलाप्रति मोहित हुने गर्छन्।
सो अध्ययनमा आखिर किन अविवाहित पुरुषहरुले विवाहित महिलालाई अविवाहित युवतीहरुलाई भन्दा धेरै मन पराउँछन् भनेर उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको थियो।
अध्ययनका अनुसार अविवाहित युवाले विवाहित महिलासँग डेट गर्न चाहनुका निम्न ५ कारणहरु रहेका छन्ः
अविवाहित महिलाहरुको तुलनामा विवाहित महिलामा आत्मविश्वास धेरै हुने गर्छ। उनीहरुको यो खुबीको कारणले भर्खरका युवाहरुलाई उनीहरुतर्फ खिच्छ। उनीहरुलाई महिलाहरुले आफूलाई कुनै पनि समस्याबाट बाहिर निकाल्न सक्छन् भन्ने लाग्छ।
२. केयरिङ स्वभाव
विवाहित महिलाहरु धेरै नै केयरिङ स्वभावका हुन्छन्। उनीहरु दिनभर आफ्नो परिवारको अघिपछि घुमिरहन्छन्। उनीहरुलाई परिवारको सदस्यहरुको खानपान र स्वास्थको बारेमा हरबखत चिन्ता हुन्छ।
तर, सिंगल वा अविवाहित युवतीहरुलाई कसैको पनि परवाह हुँदैन त्यसैले पनि विवाहित महिलाको केयरिङ स्वभावलाई अविवाहित पुरुषहरुले मन पराउँछन्।
३. शालीन स्वभाव
विवाहित महिलाहरु अफिस र घरको काम धेरै राम्रो तरिकाले व्यवस्थापन गर्छन्। दिनभर काम गर्दा पनि उनीहरुको अनुहारमा मुस्कान देख्न सकिन्छ। उनीहरु हत्तपत्त कुनै कुरामा आफ्नो असन्तुष्टि वा रिस प्रकट गर्दैनन् र यस्तो बानी युवाहरुलाई मन पर्छ।
४. हर्मोनमा आउँछ परिवर्तन
विवाहपछि महिलाको हार्मोनमा कैयौं परिवर्तन आउँछन्। यी परिवर्तनको कारण उनीहरु पहिला भन्दा धेरै आकर्षक र स्मार्ट देखिन्छन्। यसको साथै उनीहरुको अनुहारमा चमक पनि आउन थाल्छ जसले अविवाहित युवाहरुलाई आफूतिर आकषिर्त गर्छ।
५. कामको मात्रै कुरा गर्ने बानी
विवाहित महिलाहरु कामको मात्रै कुरा गर्छन् र जिम्मेवारीको कारण व्यवहारिक हुन्छन्। आफ्नो काम भन्दाबाहेक अरु कुरामा ध्यान दिने उनीहरुलाई फुर्सद पनि हुँदैन।
तर, अविवाहित युवतीहरु कैयौं घण्टासम्म बिना मतलब फोनमा झुण्डिरहन्छन्। विवाहित महिलाको कामको बारेमा मात्रै सोच्ने बानी युवाहरुलाई धेरै राम्रो लाग्छ।
Previous post: तेजाबको सहज बिक्री वितरणमाथि नियन्त्रण गर्न माग
Next post: गायक गुरुङको मौलिक सालैजो गीत ‘हिमाली पाखा’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)